Ruzivo rwekuona | Chitarisiko Prototype - Createproto - Createproto Tech Co, Ltd.
KUSHANDISA / Mharidzo yekuona
Mhando dzemharidzo dzakagadzirirwa kutaridzika uye kunzwa senge chaicho chigadzirwa. Nekukurumidza prototyping matekinoroji e3D kudhinda, CNC machining, uye post-yekupedzisa, GadziraProto inogadzira yemhando yepamusoro yekuratidzira midhiya mamodheru zvakada kufanana kune chaiwo zvigadzirwa. Aya mamodheru akadhirowewa akakodzera kuti ashandiswe mumapoka anotarisisa, maratidziro ekutengeserana uye zvimwe zvekutengesa nekutengesa zviitiko.
Kushambadzira Yako Invention, Idea kana Chigadzirwa
Chii chinonzi Presentation Prototype?
Mharidzo yekuratidzira chiratidzo chekuona chekuti magumo ekugadzirwa dhizaini anotaridzika sei. Chinangwa chayo ndechekuratidzira yako 3D yekuona modhi uye kuunza kufarira muvateereri vako. Ivo havafanirwe kushanda senge inoshanda modhi, asi iwe zvakare haudi kuti ivo vaite senge vakaomarara uye vasina kupunzika senge yako pfungwa mamodheru. Ipo iyo modhi yemafungiro yakafanana neiyo 3D sketch, yemuenzaniso modhi yakafanana neicho chaicho chinoonekwa che 3D.
Mune zvimwe zviitiko, kuratidzira prototype inodawo kupa kuratidzira kunoshanda kwechigadzirwa. Mhando iyi yemhando inobatanidza mashandiro echigadzirwa nechitarisiko chose. Izvo zvingangoita kuti zvigadzirwa zvegiredhi zvekushandisa zvichashandiswa kuyera mutengo kunyatso neyakagadzirwa mhando. Iyi prototype isarudzo yakanaka yekuratidza kugoneka kwechigadzirwa pasati pagadzirwa nevazhinji.
Yekutengesa Kukosha Kwekuona Mharidzo Zviratidzo
Iwo mamodheru ekuratidzira anogona kushandiswa kuratidza kune vakuru vane chekuita nehutungamiriri senge hutungamiriri, vatengi uye masimari, kana mifananidzo yekutengesa kana yekushambadzira mifananidzo kuti ikubvumire kupihwa marezenisi chigadzirwa chako, kana kushambadzira kwekutengesa uye kutsvagisa musika nevanogona kuve vatengi.
Kunyangwe midhiya yemhando inodiwa kana kuti kwete, zvinoenderana neyako nzira yekutengesa, zvigadzirwa zvigadzirwa uye bhajeti. Haasi ese projekiti ane izvi zvinodiwa. Nekudaro, iwo anogona kuve maturusi akakosha kana akashandiswa zvine musoro. Nekuti mamodheru ekuratidzira haangogone kudyidzana nevatengi mukutarisa kwekutarisa, uye anogona kushandiswa kukurukura nevatengi vatengi nezve zvavanotarisira zvechigadzirwa, zvichikupa iwe mukana wekuongorora zvirinani mafungiro avo nezvechigadzirwa mumatanho ekutanga ekugadzirwa.
Mamiriro Ekushandisa Mharidzo dzeMharidzo Roti
Inomutsa kufarira kwemusika
Kuziva uye kunzwisisa mikana
New chigadzirwa kuratidzira
Kuvandudza mikana yekuwana mari
Kutengesa uye kushambadzira sampuli
Dzidzo uye rubatsiro rwekudzidzisa
Iyo Solution Yakanakisa kune Yako Ekuona Mharidzo Prototypes
Zvinoenderana neyako yechigadzirwa yekuvandudza maitiro, mharidzo dzekuratidzira dzinogona kugadzirwa usati kana mushure mekunge wagadzirisa dhizaini dhizaini ine inoshanda prototype. Kana iwe uchizogadzira dhizaini optimization, iwe ungangoda kushandisa chinoonekwa chitarisiko prototype pamwe neyako dhizaini timu pakutanga, kuti iwe ugone kupinza zvemukati wongororo mune yako dhizaini yeanoshanda prototype. Nekudaro, kana iwe uchizoita yekutsvaga musika nekukurumidza sezvazvinogona, iwe unogona zvakare kuratidza varimi kana vangangove marezinesi mharidzo mamodheru pamwe nemusanganiswa wechigadzirwa mashandiro uye nechitarisiko chayo chose.
Chero zvaunoda, GadziraProto inogara ichikwanisa kupa yakanakisa prototype matekinoroji kutsigira bhizinesi rako.
Sarudza 3D Kudhinda?
Kudhinda kwe3D uye yekuwedzera yekuwedzera inokupa iwe huwandu hwesarudzo-dzinodhura uye nekukurumidza prototyping sarudzo dzinogona kudzikisira zvakanyanya nguva dzekutungamira uye mutengo wekugadzira iwo akanakisa emhando dzemharidzo.
Kana CNC Prototyping?
Post Kupedza Kutsigira
Iwe unoda here kutora cosmetic prototype kana pendi prototype? Isu tine yakanyanya kudzidziswa prototype yekupedzisa timu yakagadzirira kushandura magadzirirwo ako ave chaiwo. Mumwe nemumwe wavo anokwanisa kubata nemhando yepamusoro mhando yekuratidzira prototype kugadzira. Ivo vanoteerera kune zvese zvese, kuitira kuti vese vagone kuenderana nezvinotarisirwa nevatengi.
Kutumira kupedzisa kunopa mufananidzo mutsva kungori muchina wekuratidzira prototype. Dhipatimendi redu rine ruzivo rwekupedzisa rinoshandisa kupedzisa ruoko, primer, pendi-mechi pendi, magadzirirwo uye akapfava-kubata kupedzisa uye hunyanzvi hwakawanda hwekambani yekereke chaiyo uye kutaridzika kwakanyanya.
Kupa inomiririra inomiririra prototype yakafanana neyekupedzisira chigadzirwa kumutengi, isu tinotsigira imwe-yekumira pamusoro pekupedzisa mashandiro kuitira mukana wevatengi, uye tinopa kukosha-kwakawedzera rutsigiro kune vagadziri vezvigadzirwa, tichivabatsira kukwidziridza iwo magadzirirwo avo chaiwo maitiro ekugadzira zvigadzirwa.
Cnc Kuchengetedza, Kurumidza Prototyping, Kukurumidza Prototyping, 3d Kudhinda & Rapid Prototyping Services, Cnc Rapid Prototyping, Inokurumidza Prototyping Uye Kugadzira,